कुटाकुट भो ! धमलाको कार्यक्रममा फेरी कुटाकुट !(भिडियो सहित «
कुटाकुट भो ! धमलाको कार्यक्रममा फेरी कुटाकुट !(भिडियो सहित
प्रकाशित मिति : 25 June, 2019 10:32 pm
पत्रकार ऋषि धमलाले प्राइम टेलीभिजन मार्फत संचालन गर्ने कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् आजभोली नेता जुधाउँने थलो बनेको छ । धमलाको कार्यक्रमको एउटा विशेषता भनेको समान चासोको विषयमा फरक मत राख्ने अतिथिहरुलाई कार्यक्रममा निम्ता गर्दछन् र उनिहरुलाई उत्तेजित बनाउँने प्रश्न गरेर आफु भने मजा मानेर हाँसेर बस्छन् । पछिल्लो नेपाली मिडियाका कार्यक्रमहरु युटुव भ्युजलाई आधार मानेर निर्माण हुँदै आएका छन् ।
जसको ज्वलन्त उदाहरण हो धमलाको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् । प्राइम टेलीभिजन बाट प्रसारण हुने उक्त कार्यक्रमको टेलीभिजनमा खासै टिआरपी छैन तर युटुवमा भने धमलाको कार्यक्रमले राम्रो टिआरपी कमाइरहको छ । धमला आफैँ पनि युटुवमा धेरे बिक्ने मसला हुन् भने उनले विषयवस्तु र वक्ता छनोट पनि त्यहि कोण बाट गर्ने गरेका कारण धमलाको हमला जनता जान्न चाहन्छन् मार्फत राम्रै सँग हुने गरेको छ ।
धमलाको कार्यक्रममा पुगेपछि नेताहरु खै किन हो कुस्ती खेल्न पनि पछि पर्देनन् केहि समय अधि मात्रै नेकपाका नेता सत्य नारायण मण्डल र नेपाली काग्रेसका नेता रामचन्द्र यादव विचको कुस्ती त निकै चर्चितनै भयो त्यस पछि धमलाको कार्यक्रममा बेलाबखत नेताहरु कुस्ती खेल्न तम्सिएकै छन् । को भन्दा को कम भन्ने इगोका कारण आफु हावी हुन खोज्दा जनताको विचमा बेइजत भैसकेको नेताहरुले पत्तै नपाउँने ।
यसै विच धमलाको कार्यक्रममा दुइ अधिवक्ताले आफ्नो हैसियत भुलेर निकै तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गर्दै कुटाकुटकै शैलीमा प्रस्तु्त भएर बेइजत गरेका छन् । जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमा अतिथिका रुपमा निम्त्याइएको २ वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो हैसियत भुलेर जग हँसाएका छन् । नेकपाको तर्फबाट राष्टिय सभाको सदस्य बनेका अधिवक्ता रामनारायण विडारी र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निकै तल्लो स्तरमा प्रतुत भएर झण्डै कुटाकुट गरेका छन् ।
सरकारले सदनमा प्रस्तु्त गरेका विभिन्न विधेयको विषयमा कुराकानी चल्दै गर्दा कुराकानीकै विचमा विडारीले त्रिपाठीलाई तोरी लाउरे भन्ने शब्द प्रयोग गरे पछि रिसले आगो बनेका त्रिपाठीले कार्यक्रममै बबण्डर गरेका थिए । विडारी माथी निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका त्रिपाठीले विडारीलाई तपाई पटक पटक सांसद हुन पर्ने त्यस्तो अलौकिक प्रतिभा के छ भन्दै खनिएका थिए । विडारी माथी रिस पोख्ने मोका यहि हो जसरी खनिएका त्रिपाठीले विवादास्पद व्यापारी अजय सुमार्गीएको आर्शिवादकै कारण विडारीले मौका पाएको आरोप लगाएका थिए ।
निकै चर्को स्वरमा कराउँने विडारी त्रिपाठीले आरोप लगाइरँदा प्रतिरक्षानै गर्न नसक्ने गरि कमजोर मुखाकृतीमा देखिएका थिए । आफु माग माथी त्रिपाठीले लगाएको आरोपको प्रतिकृया दिँदै विडारीले त्रिपाठीलाई युुरोपेली युनियनको पैसाले बाँचेको दलाल भनेका थिए । आफुलाई दलाल भने पछि निकै आक्रामक बनेका त्रिपाठीले आफ्ुलाई लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न विडारीलाई चुनौती दिएका थिए । सुमार्गीको आशिर्वादले विडारीले पद पाएको म प्रमाणित गर्छु मैलै युरोपेली युनियनको पैसा खाएको तपाई प्रमाणित गर्न सक्नु हुन्छ भन्दै त्रिपाठीले सातो खाए पछि विडारीको मुख बन्द भएको थियो ।
२ अधिबक्तालाई भिडाएर कार्यक्रम प्रस्तोता ऋषि धमला भने खुब मजाले आनन्द मानिरहेका थिए । पुरै कार्यक्रम तनापुर्ण रुपमानै वित्यो कार्यक्रम अवधि भरिनै सुमार्गी काण्ड र युरोपेली युनियनको दलाल काण्ड बल्झिरहेको थियो । विधेयको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको अतिथि द्धय टन्न सार्वजनिक टेलिभिजन बाट एक अर्काको पोल खोलेर बाहिरिए । कार्यक्रमको विषयवस्तु अनुसारको कुराकनी त भएननै मै हुँ भन्ने दुवै जनाको कर्तुतहरुको भने राम्रै सँग पर्दाफास भयो । सबै भन्दा रोचक कुरा चाँही सबैतिर सँधैभरी निकै अस्वाभाविक तरिकाले चिच्याउँने रामनारायण विडारीको अनुहार चाँही हेर्न लायक देखिएको थियो ।